ဒီဇင်ဘာ 2020 – Baotian ပရိဘောဂကုမ္ပဏီ, Ltd.
ငှားရမ်းမှုတိုတောင်းသောတိုက်ခန်းငယ်သည်ခေတ်မှီပြီးခေတ်သစ်လူနေမှုပုံစံစသည့်ဖြစ်လေ့ရှိသည်. သေးငယ်တဲ့အာကာသ၏ကြားမှ၌တည်၏, ကျဉ်းမြောင်းသောစင်္ကြံ, နှင့်အခန်းငယ်များ, ပိုမိုတောက်ပစေရန်အတွက်နည်းလမ်းအနည်းငယ်ရှိနေသေးသည်, ပိုကြီးတဲ့, နှင့်ပိုပြီးလှပသော. ကျယ်ဝန်းန့်အသတ်၏မျက်နှာကိုထောက်။, ကျွန်ုပ်တို့သည်ပရိဘောဂများကိုအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းနှင့်ကောင်းစွာရောနှောထားရမည်ဖြစ်သည်, အနည်းဆုံးငါတို့မျက်စိကနေအကောင်းတစ် ဦး ရူပါရုံကိုထင်ဟပ်. ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပရိဘောဂရွေးချယ်မှုနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောအရသာတို့ကိုချွေတာနိုင်သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းရည်နှင့် ပတ်သက်၍ များစွာတောင်းဆိုသည်. သငျသညျကျဉ်းကျုတ်နှင့်ရှုပ်ပွနေသောတိုက်ခန်းကိုအရမ်းငြီးငွေ့ခဲ့ကြလျှင်သင်တစ် ဦး တည်းမဟုတ်, သို့ရာတွင်မစိုးရိမ်ကြနှင့်. နေရာလွတ်၏အခမဲ့လက်မတိုင်းကိုအသုံးချနိုင်ရန်သင်၌ကောင်းသောအကြံဥာဏ်ကောင်းအချို့ရှိပါသည်. အသေးစားတိုက်ခန်းပုံစံအလယ်ပိုင်းရာစုခေတ်သစ်စတိုင်အလယ်ရာစုခေတ်သစ်ပုံစံတွင်ရောနှောထားသောပစ္စည်းများပါ ၀ င်သည်, ရင့်ကျက်လိုင်းများနှင့်နေရာတိုင်းပတ်ပတ်လည်ထောင့်. ယေဘုယျအားဖြင့်, ပရိဘောဂသည်သစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဤရွေးချယ်မှုများဖြစ်သင့်သည်, သတ္တု, နှင့်ပလပ်စတစ်ပစ္စည်း. အရောင်များကိုတောက်ပပြီးတက်ကြွစွာပြသထားသည်, နှင့်ပုံစံများကိုမျက်စိ - ဖမ်းဖို့ရှိပါတယ်. အဘယ်ကြောင့်သေးငယ်တဲ့တိုက်ခန်းများအတွက်အလုပ်လုပ်ဤမျှစုံလင်ခြင်းဖြစ်သနည်း? အဓိကအကြောင်းနှစ်ရပ်ရှိသည်. 1. အလယ်ပိုင်းရာစုခေတ်သစ်စတိုင်သည်, ဒီဇိုင်နာများသည်ပရိဘောဂများကို ပို၍ အာရုံစိုက်လေ့ရှိသည်, ထပ်တိုးအသံထွက်များအစား၎င်းသည်တိုက်ခန်း layout အရ၎င်းကိုစီစဉ်ရန်ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိရန်သေချာသည်. သငျသညျကျယ်ဝန်းတောက်ပသေးငယ်တဲ့အိမ်သူအိမ်သားရနိုင်ပေမယ့်အတွင်းပိုင်းအလှဆင်အပေါ်အဘယ်သူမျှမအပေးအယူ. 2. လူတို့၏မျက်လုံးကိုဆွဲဆောင်ရန်မီးမောင်းထိုးပြသည့်တစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုရှိသည်, ၎င်းသည်စိမ်းလန်းသောကတ္တီပါထည်ဆိုဖာသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းသစ်သားဖွဲ့စည်းထားသည့်ကက်ဘိနက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်. ဂရုတစိုက်ထူးချွန်သောပရိဘောဂများကိုဖြတ်သန်းသွားခြင်း, သေးငယ်သောနေရာကိုသင်အမှန်ပင်လျစ်လျူရှုလိမ့်မည်. ဤတွင်စိမ်းလန်းသောကတ္တီပါထည်ဆိုဖာသည်နေရာသေးသေးလေးနှင့်ကောင်းစွာသွားနိုင်သည်. ဒါဟာ '' configuration ကို modular အပိုင်း, သငျသညျတူသောပထမ ဦး ဆုံးမျက်မှောက်ပေးခြင်း. Shop Now →ရိုးရာရိုးရှင်းသောရိုးရှင်းသောရိုးရာရိုးရှင်းသောရိုးရှင်းသောရိုးရာရိုးရှင်းသောရိုးရာရိုးရှင်းသောရိုးရှင်းသောပုံစံသည်ရိုးရာပုံစံနှင့်ကွဲပြားသည်, ကပိုပြီးအချိုးမညီပုံသဏ္shapeာန်ကိုမီးမောင်းထိုးပြ, ချောမွေ့သောလိုင်းများနှင့်အလျားလိုက်မျက်နှာပြင်. အဓိကအားဖြင့်အနက်ရောင်ကိုအဓိကထားသည်, အဖြူ, နှင့်အချို့သောအခြားသူများကိုစင်ကြယ်သောအရောင်များ. အဘယ်ကြောင့်သေးငယ်တဲ့တိုက်ခန်းများများအတွက်ကောင်းစွာကိုက်ညီ. 1. ထုံးတမ်းစဉ်လာအနိမ့်ဆုံးသည်များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးသည်။
the ည့်ခန်းအတွက်ဘယ်အိပ်ရာကိုမကြာခဏဝယ်ယူသလဲ? အဖြေလုံးဝထည်ဖြစ်ပါတယ်, သားရေ, သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်, အရာအများစုမိသားစုများအတွက်ကြိုတင်ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်. ဒါပေမယ့်အဲဒီဖောင်းဖောင်းဖောင်းဖောင်းတွေကြားဖူးတယ်? ဟုတ်တယ်, ၎င်းသည်လူအများစုအတွက်အနည်းငယ်ထူးဆန်းပြီးမရင်းနှီးသောအသံဖြစ်သည်. ငွေရောင်ဆိုဖာတွင် PVC ပါဝင်သည်, နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ဓာတ်ငွေ့စီးဆင်းရန်ဖိအား. ၎င်းသည်ရိုးရာပရိဘောဂအမြောက်အများကိုဖယ်ရှားပစ်သည်, အိမ်တွင်းနှင့်အပြင်နှစ်ခုလုံးကိုတင်ထားခဲ့သည်. deflated ခံရပြီးနောက်, ဆိုဖာသည်အလွန်သေးငယ်သောကြောင့်သယ်ဆောင်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်လွယ်ကူသည်, အရာခေတ်မှီခြင်းနှင့်အဆင်ပြေနှစ် ဦး စလုံးဖြစ်ပါတယ်. ဒီနေ့, inflatable ဆိုဖာသည်၎င်း၏အရောင်အမျိုးမျိုးကြောင့်ယခင်ကထက် ပို၍ ပျံ့နှံ့နေသည်, ကြည်လင်ပစ္စည်း, နှင့်ထူးခြားသောပုံစံမျိုးစုံ. ငါဆိုဖာနှင့်ပတ်သက်ပြီးရှုပ်ထွေးနေ ဦး မည်ထင်သည်, ကျန်ရှိနေသေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသွားကြည့်ရအောင်. ငွေဖောင်းပွမှုရွေးချယ်ပုံ? 1. တာရှည်ခံခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းရန်လွယ်ကူခြင်းကြာရှည်ခံမှုတွင်ရှုထောင့်နှစ်ခုပါဝင်သည်. တစ်ခုမှာဆိုဖာအတွက်သက်တမ်းရှည်သည်, နှင့်အခြားအသွင်အပြင်ရှိမရှိဖြစ်ပါတယ်, အရောင်နှင့်တောက်ပမှုမြန်နိုင်သမျှကြာရှည်နိုင်ပါတယ်. 2. ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်နေရာချွေတာခြင်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းဆိုသည်မှာပရိဘောဂသည်၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများတွင်အသုံးချနိုင်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်, ထိုကဲ့သို့သောအပိုင်းနှင့်အိပ်ပျော်ဆိုဖာအဖြစ်. ၎င်းသည်ပရိဘောဂအရေအတွက်ကိုလျော့ကျစေရုံသာမကအခြားအလှဆင်ပစ္စည်းများအတွက်နေရာများစွာလည်းချွေတာနိုင်မည်ဖြစ်သည်. ဖြည့်စွက်ကာ, ဤအခေါက်သို့မဟုတ်အပိုင်းဆိုဖာရွေးချယ်ပါ, အရာပိုကောင်းတဲ့ခြယ်လှယ်များအတွက်ဒေါင်လိုက်အာကာသရှည်နှင့်သိမ်းပိုက်areaရိယာကယ်တင်တော်မူ၏. 3. သက်တောင့်သက်သာရှိခြင်းနှင့်အဆင်ပြေခြင်း အကယ်၍ သင်သည်နှစ်သိမ့်မှုကိုစိတ်အားထက်သန်စွာချစ်မြတ်နိုးခဲ့လျှင်၎င်းသည်အချက်သုံးချက်ကိုအာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်သည်, မှန်ကန်သောစကေး, ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပစ္စည်းများ. လူ့ခန္ဓာကိုယ်အသွင်အပြင်များကိုသာဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရုံမျှမကဤဖောင်းပွသောဆိုဖာသည်သက်သောင့်သက်သာခံစားမှုကိုပေးနိုင်သည်. ထိုင်ခုံအားလုံး, ခုံများ, အိပ်ရာ, ထမင်းစားပွဲစားပွဲ, ထိုင်ခုံများနှင့်သိုလှောင်ရေးပရိဘောဂများသည်လူတို့၏ထုံးစံနှင့်ကိုက်ညီရန်သေချာစေသင့်သည်, လူတွေကိုစွမ်းအင်ချွေတာပေးတယ်, မကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုလွှတ်ပါ, ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ဖယ်ရှားပစ်, နှင့်ကျန်းမာရေးတိုးတက်အောင်. Plus အား, ထိုကဲ့သို့သောပုံသဏ္andာန်နှင့်အရောင်အဖြစ်အမြင်အာရုံအချက်များစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်သာခြင်းကျေနပ်အောင်နိုင်ရန်အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်သင့်၏. 4. အရောင်နံရံနှင့်ကြမ်းပြင်နှစ်ခုလုံးသည်အဖြူရောင်ဖြစ်ပါက, ပိုမိုပေါ့ပါးသောအရောင်ကိုရွေးချယ်ရန်အကြံပြုသည်. သို့သော်, စည်းကမ်းချက်များအရ ...
မတူညီသောဆိုဖာအမျိုးအစားများစွာရှိပြီးသင်သည်အိမ်အသစ်သို့ပြောင်းရွေ့ခြင်းသို့မဟုတ်အဟောင်းကိုအစားထိုးခြင်းရှိမရှိကိုရွေးချယ်ရန်ခက်ခဲသည်. ဒါပေမယ့်အဲဒါဟာထောင်နဲ့ချီတဲ့အပိုင်းအစတွေအတွက်ရွေးချယ်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးအရာတွေထဲကတစ်ခုလို့ငါယုံကြည်တယ်. ငါဤဆောင်းပါးကိုရေးသားဖို့ဆုံးဖြတ်ဒါကြောင့်ပါပဲ. ငါနှစ်သက်တာတစ်ခုကပရိဘောဂဆိုင်တွေမှာလမ်းလျှောက်ပြီးသူတို့ရဲ့ဆိုဖာကတ်တလောက်လေ့လာဖို့ပါ. ထို့နောက်ဘလော့ဂ်များစွာသည်ဆိုဖာရွေးချယ်မှုအတွက်လမ်းညွှန်များစွာကိုရေးသားခဲ့သည်. အနာဂတ်မှာဆိုဖာပေါ်မှာထိုင်ပြီးမင်းရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းလိုအဆင်ပြေမပြေသေချာအောင်လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမရှိဘူးဆိုတာငါတကယ်ပဲထင်ပါတယ်. တစ်နေ့, သင်သည်ဆိုဖာအသစ်တစ်ခုကိုပြောင်းလဲရန်ပြင်ဆင်ထားသော်လည်းသင်သည်များစွာသောဆိုဖာအမျိုးအစားများနှင့်ရင်ဆိုင်ရပြီးအရောင်းမ ၀ င်သောနိဒါန်းများနှင့်ရင်ဆိုင်ရလျှင်ဤဆောင်းပါးကိုဖတ်ပါ. ဆိုဖာအမျိုးအစားများကိုစာရင်းပြုစုကြပါစို့, ထည်ဆိုဖာ, သားရေဆိုဖာ, အပိုင်းဆိုဖာ, recliner ဆိုဖာ, အိပ်ယာဆိုဖာ, ဆိုဖာအိပ်ယာ, Chesterfield စတိုင်ဆိုဖာ, chaise နှင့်အတူဆိုဖာ, ဖူလုံ, သို့မဟုတ်ကြောင်းကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသောချစ်ခြင်းမေတ္တာထိုင်ခုံ. ပရိဘောဂစတိုးဆိုင်များသို့သင်ဝင်သွားသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေရပေမည်. သင်သည်သင်၏ဆိုဖာအမဲလိုက်တွင်လျင်မြန်စွာစတင်ကူညီရန်, သင့်အိမ်အတွက်အကောင်းဆုံးနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောဆိုဖာတစ်ခုရရှိရန်အတွက်ဆိုဖာများစုဆောင်းထားခြင်းဖြစ်သည်. ဆိုဖာအမျိုးအစားများလက်ရှိမိသားစုတွင်အထည်အလိပ်ဆိုဖာ, တစ် ဦး ထည်ဆိုဖာအများအားဖြင့်၎င်း၏နိမ့်သောစျေးနှုန်းကြောင့်သားရေသို့မဟုတ်သစ်သားထက်အသုံးပြုသည်, ရေရှည် & အဆင်ပြေ features တွေ. သင်ထည်ကိုရွေးချယ်ပါက, သင်၏ဘဝပုံစံနှင့်မိသားစု ၀ င်များမည်ကဲ့သို့စဉ်းစားသင့်သည်. သင်ဆိုဖာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ဖို့အချိန်နည်းနှင့်အတူအလုပ်များနေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုကဲ့သို့သော polyester အဖြစ်ဒြပ် microfibers အကြံပြုပါသည်, နိုင်လွန်, အရာအစွန်းအထင်းခံဖြစ်ကြပြီးဆိုဖာဤထောင့်သို့ယိုစိမ့်ထက်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာယိုဖိတ်စောင့်ရှောက်. သငျသညျနှစ် ဦး စလုံးရန်အလွန်ညင်သာစွာထိုင်နှင့်လွယ်ကူသောဖန်တီးပါလျှင်, သင့်အိမ်အတွက်လေထုနေထိုင်ခဲ့တယ်, ထို့နောက်ဝါဂွမ်းနှင့်ပိတ်ချောများသည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုများဖြစ်သည်. သူတို့လည်းကလေးသူငယ်လို့ပြောကြတယ်, တောက်ပသောအပြုံးဖြင့် ၀ တ်ထားသောကလေးများသည်ချစ်စရာကောင်းသောဆိုဖာပေါ်တွင်ထိုင်။ မည်မျှချစ်စရာကောင်းသည်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ. ထည်ဆိုဖာများအတွက်နောက်ထပ်အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးသောအရောင်များနှင့် ...
သင့်အိမ်အတွက်ဆိုဖာအသစ်ဝယ်သည့်အခါလူတို့သည်ဤမေးခွန်းများကိုမကြာခဏစဉ်းစားတတ်ကြသည်, ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုသောစတိုင်, ဘယ်ပစ္စည်းကကြာရှည်ခံမလဲ, သားရေသို့မဟုတ်ထည်ဆိုဖာ? တကယ်တော့, ဘတ်ဂျက်ရှိမရှိစဉ်းစားရန်အချက်များအများကြီးရှိပါတယ်, နှစ်သိမ့်မှု, စတိုင်လ်, အားလုံးပြီးနောက် etc စသည်တို့သည်သင်၏အသက်တာ၏အရေးကြီးဆုံးကဏ္ sections တစ်ခုဖြစ်သည်. ထည်ဆိုဖာ vs သားရေ၏စည်းကမ်းချက်များ၌, သင်နေထိုင်ပုံ၊ သင်နေထိုင်နေပုံနှင့်၎င်းကိုဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်. ထို့ကြောင့်, သင့်အိမ်အတွက်စံပြဆိုဖာ ၀ ယ်ယူရန်ရည်ညွှန်းရန်အောက်ပါအချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့စာရင်းပြုစုထားသည်. သားရေနှင့်ထည်ဆိုဖာ ၀ ယ်သည့်အခါထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အရာသက်တောင့်သက်သာရှိခြင်းသက်တောင့်သက်သာရှိခြင်းသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးခံစားမှုအပေါ်တွင်မူတည်သည်. ထို့ကြောင့်သင်သာလျှင်သင်ကိုယ်တိုင်မေးမြန်းရန်ဖြစ်သည်, ဘယ်တစ်ခုကသင်၏ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုကောင်းနေသည်? အများအားဖြင့်ခံစားမှုမှာထည်သည်သားရေထက် ပို၍ အဆင်ပြေသည်၊, ပို။ pliable, နှင့်အခန်းအခြေအနေများလျော့နည်းအပူချိန် - တုံ့ပြန်. သို့သော်၎င်းသည်ထည်ပစ္စည်းနှင့်အထောက်အကူစနစ်ပေါ်တွင်လည်းမူတည်သည်. ယေဘုယျအားဖြင့်, ထည်ဆိုဖာများသည်သားရေဆိုဖာများထက်ပိုမိုအသက်ရှူလွယ်ကူစေသည်. သငျသညျအချိန်ကြာမြင့်စွာထိုင်လျှင်ပင်, သင်၏ခြေဖဝါးသည်အလွန်ပူ၏, စိုစွတ်သောနှင့် stuffy, ဒါကလူတွေကိုပိုပြီးသက်သောင့်သက်သာဖြစ်စေပြီးစိတ်နာကျင်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်. သို့သော်, တစ်ခုမှာဂရုစိုက်ရပါမည်, အချို့သောစျေးသက်သက်သာသာရှိသောအထည်များသည်လျော့ရဲရဲဖြစ်လာပြီးကူရှင်များပေါ်တွင်စုပုံလာလိမ့်မည်. သားရေဆိုဖာသည်, ဒါကြောင့်မကြာခဏရာသီဥတုကလွှမ်းမိုးပါတယ်. ဆောင်းတွင်းမှာ, သားရေဆိုဖာသည်အလွန်အအေးလွန်။ အလွန်ထိရောက်နိုင်သည်, ဒါပေမယ့်နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ကအပေါ်စောင်ယူအဖြစ်လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပူချိန်မှတစ် ဦး နီးကပ်မှတက်နွေးပါလိမ့်မယ်. နွေရာသီမှာ, သင့်မှာလေအေးပေးစက်တပ်ဆင်ခြင်းမရှိရင်တောင်, သားရေဆိုဖာများသည်ထည်ထက်အအေးခံ။ ချွေးထွက်စေပြီးသားရေနှင့်ကပ်စေသည်. သေချာပါတယ်, ကျနော်တို့ရာသီဥတုထိန်းချုပ်မှုအခွအေနေကို install လုပ်ဖို့အကြံပြုပါသည်, သောပူသောရာသီဥတုမှာအများကြီးနှစ်သိမ့်တတ်၏. ဘတ်ဂျက်သားရေအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ငြင်းခုံမှုမှာ. ထည်ဆိုဖာ, နှစ်ခုတူညီတဲ့စတိုင်၌ရှိကြ၏လျှင်, တူညီတဲ့အရည်အသွေးကိုဘောင်နှင့်အတူဖန်ဆင်းတော်မူ၏, သားရေယေဘုယျအားဖြင့်ပိုမိုစျေးကြီးသည်. Wayfair မှာသားရေရော၊, ရှေ့သို့…
အိမ်တွင်းပရိဘောဂများ၏အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ as တစ်ခုအဖြစ်အိပ်ရာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘ ၀ တွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်. အဆင်ပြေပြီးပျော့ပျောင်းသောအိပ်ယာသည်အိပ်စက်ခြင်း၏အရည်အသွေးကိုဆုံးဖြတ်သည်. အိပ်ရာအိပ်ခြင်းနှင့်အပန်းဖြေရန်ခက်ခဲသည်ဆိုပါက, ၎င်းသည်သင်နောက်တစ်နေ့ပင်ပန်းသည်ဟုခံစားရစေပြီး၎င်းသည်လူတစ် ဦး ၏အလုပ်အခြေအနေကိုအကြီးအကျယ်သက်ရောက်စေသည်. ပစ္စည်းအပေါ်အခြေခံပြီးအိပ်ရာကိုရွေးချယ်ဖို့အမျိုးအစားများအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်, ထိုကဲ့သို့သောထည်အဖြစ်, သတ္တု, နှင့် faux သားရေအိပ်ရာ. သားရေအဆင့်အတန်းရှိသောခေတ်မီဘက်စုံသုံးအိပ်ယာသည်လူတို့၏လူနေမှုအဆင့်အတန်းနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုများနှင့်အိပ်စက်ခြင်းအရည်အသွေးအတွက်ပိုမိုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သောထွန်းသစ်စအိပ်ရာတစ်ခုဖြစ်သည်။. အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အရောင်များ, ပုံစံမျိုးစုံ, မြင့်မြတ်သောနှင့်ကြော့ရှင်းကနက်ရှိုင်းစွာလူရဲ့အာရုံကိုဆွဲဆောင်ပါစေ. ထို့ကြောင့်, ဒီဆောင်းပါးကသင့်ကိုခေတ်သစ်ဘက်စုံသုံးအိပ်ယာကမ္ဘာထဲရောက်စေပါလိမ့်မယ်. ဘာကြောင့်လူတွေဒီလိုအိပ်ရာမျိုးကိုရွေးချယ်ချင်ကြတာလဲ? အားသာချက်အမြောက်အများကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်. သန့်ရှင်းရလွယ်ကူသားရေအိပ်ရာ၏ headboard နှင့် frame ကိုလုံးဝ faux သားရေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်, ဆိုလိုသည်မှာသန့်ရှင်းရေးနှင့်ထိန်းသိမ်းရန်မအားထုတ်မှုကိုဆိုလိုသည်. ပြီးတာနဲ့သူကညစ်ပတ်တယ်သို့မဟုတ်အချိန်ကြာမြင့်စွာမသုံးပါဘူး, အစက်များကိုသန့်ရှင်းစေရန်ခြောက်သွေ့သောမျက်နှာသုတ်ပဝါဖြင့်သုတ်လိမ်းပါ။ ဖုန်မှုန့်များကိုရှင်းလင်းစေရန်အတွက်သင်သည်အခြားအရာများကိုဂရုစိုက်ရန်အချိန်များစွာသက်သာရုံသာမကမျက်နှာပြင်ပျက်စီးခြင်းကိုမစိုးရိမ်ပါ။. ရွေးချယ်စရာအရောင်များကိုရီယမ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ, အသားအရေကိုပိုမိုရွေးချယ်ရန် faux leather multifunctional bed သည်ပိုမိုရွေးချယ်စရာရှိသည်. သင်ရုံရိုးရှင်းသောဝယ်လျှင်, အောက်ပါအရောင်များကိုကျွန်တော်အထူးအကြံပြုလိုတယ်, အဖြူ, အနီေရာင်, ခရမ်းရောင်, နှင့်အညိုရောင်. ဒါပေမယ့်ဂရုစိုက်ဖို့တစ်ခုအရာ, အရောင်များကိုသင်၏အခန်း၏ပုံစံနှင့်လိုက်ဖက်သင့်သည်, အဖြူသည်ခေတ်သစ်ကိုဆိုလိုသည်; အနီရောင်စတိုင်; မောင်းသောအထည်; အညိုရောင်ပူနွေး, စသည်တို့. တစ် ဦး ဖြန့်ဖြူးသို့မဟုတ်အရောင်းလျှင်, အရောင်များကိုတောင်မှစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ရန်ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပြည်တွင်းစျေးကွက် ဦး စားပေးမှုများမှအကြံဥာဏ်များကိုသင်အပြည့်အဝယူနိုင်သည်. စတိုင်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ထူးခြားသောစတိုင်, အဆိုပါဘက်ပေါင်းစုံအိပ်ရာကမ္ဘာကိုလွှမ်းမိုးအကြင်သူသည်ရိုးရာစတုဂံအိပ်ရာဘောင်ကိုဖြိုဖျက်. ကျနော်တို့အချင်းနှစ်မီတာနှင့်ပုံမှန်အရွယ်အစားစတုဂံအိပ်ရာနှင့်အတူပတ်ပတ်လည်ပုတီးနှစ်ခုပေး. ချိန်ညှိနိုင်သောခေါင်းအုံးသည်ခေါင်းအုံးပေါ်ရှိခေါင်းအုံး…
နိဒါန်းလျှပ်စစ်သဲကုလားထိုင်တွင်ခလုတ်အမျိုးမျိုးရှိသည်. ခလုတ်ပေါ်ရှိအပေါ်နှင့်အောက်ခလုတ်များသည်ဆိုဖာ၏နောက်ကျောနှင့်အောက်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်. လျှပ်စစ်ဆိုဖာ၏ညှိနှိုင်းမှုနှင့်အတူ, ခေါင်းအုံးပေါ်ရှိလူတစ် ဦး ၏အနေအထားသည်လည်းပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်, ထိုကဲ့သို့သော backback အဖြစ်. တစ်ခါတစ်ရံ, လူတွေဟာသူတို့ရဲ့တင်ပါးတွေကိုနောက်ပြန်ရွှေ့ကြလိမ့်မယ်, နှင့်အပြန်အလှန်. သင်ဤကဲ့သို့သောတစ်ခုပိုင်ဆိုင်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ- တစ်ဆိုဖာအိပ်ရာထုတ်လုပ်သူ. The "မှော်" ထိုင်ခုံမှာလျှပ်စစ်ဆိုဖာကုလားထိုင်၏သောကွောငျ့ဖွစျသညျ, နောက်ကျောတက်, နှင့်ရှေ့ခြေထောက်တစ်ထပ်ထည့်ရန်မလိုအပ်ပါ, နှင့်ခြေသဘာဝကျကျလဲကျနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ် footbath ထဲမှာထားနိုင်ပါတယ်. သင်တစ် ဦး footrest လိုအပ်မယ်ဆိုရင်, သငျသညျသဘာဝကျကျထရန်ထိန်းချုပ်မှုခလုတ်ကိုသုံးနိုင်သည်. ဖွဲ့စည်းပုံရိုးရာကုလားထိုင်ထက်ပိုမိုရှုပ်ထွေးပေမယ့်, စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ပြီးတန်းမြင့်သည်. လျှပ်စစ်ဆိုဖာ၏အားသာချက်များ: 1. လျှပ်စစ်ဆိုဖာမှာဖိအားလျော့နည်းစေသည်. ဆိုဖာကုလားထိုင်သည်ပျော့ပျောင်းပြီးလူ့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ဖိအားမှာသေးငယ်သည်, ဒါကြောင့်ဆိုဖာထိုင်ခုံပေါ်မှာထိုင်ရတာပိုပြီးအဆင်ပြေမှာပါ; 2. လျှပ်စစ်ဆိုဖာတွင်အနှိပ်ခံခြင်းစနစ်ရှိသည်. လူတစ် ဦး သည်ခေတ်ပြိုင်ထောင့်ဆိုဖာတွင်ထိုင်။ လှုပ်ရှားမှုအနည်းငယ်ပြုလုပ်သောအခါ, ၎င်းသည်စမ်းရေများနှင့်ပျော့ပျောင်းသောပစ္စည်းများ၏သေးငယ်သောတုန်ခါမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်. လူ့ခန္ဓာကိုယ်သည် Periodic အပြောင်းအလဲများ၏ elastic force ကိုအကြောင်းမဲ့ဖြစ်ပါတယ်, အရာအနှိပ်၏အခန်းကဏ္playကိုကစားနိုင်ပါတယ်. 3. လျှပ်စစ်ဆိုဖာသည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်သည်. ဆိုဖာ၏ကူရှင်သည်ပိတ်ချောကဲ့သို့သောပျော့ပျောင်းသောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်, အညိုရောင်, ရေမြှုပ်, စသည်တို့. အောက်မှာအများအပြားစမ်းရေတွင်းရှိပါတယ်, အရာပျော့နှင့် elastic နှစ် ဦး စလုံးဖြစ်ကြသည်. ←ယခင်ဆောင်းပါးခေတ်သစ်ဘက်စုံသုံးကုတင်၏အားသာချက်များ…
လက်ရှိအချိန်မှာ, အများစုမှာဟိုတယ်ပရိဘောဂစိတ်ကြိုက်ပရိဘောဂဖြစ်ပါတယ်. တရုတ်၌, ပရိဘောဂအပြင်အဆင်နှင့်နေရာချထားခြင်းသည်အလွန်ထူးခြားသည်. Feng Shui ၏လွှမ်းမိုးမှုကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားနေစဉ်၎င်းသည်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံအတွက်အကျိုးရှိသည်. ပရိဘောဂနေရာချထားမှုကိုအာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်သည့်နေရာများအားလုံးကိုသင့်အားမိတ်ဆက်ပေးရန်ကျွန်ုပ်၏နောက်သို့လိုက်ပါ. ပထမနေရာကိုသင်ဂရုစိုက်သင့်သည်, ဟိုတယ်၏ပရိဘောဂခုနှစ်တွင်အိပ်ရာ၏နေရာချထား, အိပ်ရာ၏အနေအထားအထူးသဖြင့်အရေးကြီးပါသည်. အိပ်ယာတောင်မှဟိုတယ်ခန်းထဲမှာဇာတ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်. အခန်းတံခါးကိုဖွင့်ပြီးအိတ်ကိုချပြီးနောက်, အာရုံစူးစိုက်မှု၏ပထမ ဦး ဆုံးအရာဝတ္ထုပထမ ဦး ဆုံးအများအပြားခရီးသွားများ၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုများဆွဲစေခြင်းငှါအိပ်ရာဖြစ်ပါတယ်. ဟိုတယ်ပရိဘောဂတွင်အိပ်ရာထားရန်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးများစွာရှိသည်. ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့, အိပ်ရာ၏အနေအထားအဖြစ်ဝေးတတ်နိုင်သမျှတံခါးကိုဆန့်ကျင်ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်. တရုတ် Feng Shui အဆိုအရ, ပရိဘောဂနှင့်တံခါးခြံများသည်ကံမကောင်းပါ. တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, ကြေးမုံအသုံးပြုမှုသည်ဟိုတယ်ပရိဘောဂများတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်. Feng Shui ၏သဘောသဘာဝငါးခု၏သဘောသဘာဝအရ, မှန်သည်ပျက်စီးလွယ်သည်, ဒါကြောင့်နေရာချထားနေစဉ်အတွင်းအိပ်ရာမရင်ဆိုင်ရပါဘူး, အထူးသဖြင့်မှန်မှအလင်းသည်ညအချိန်တွင်အိပ်ရာပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်သောအခါ, ၎င်းသည်အနားယူရန်အထောက်အကူမပြုပါ. ဒုတိယ, ကြွင်းသောအရာလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ဆိုဖာ၏နေရာချထား, ဆိုဖာတွင်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ role မှပါဝင်သည်, နှင့်ဆိုဖာဟိုတယ်ကြွင်းသောအရာအရည်အသွေး၏စံဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါရေတပ်အပြာထောင့်ဆိုဖာဆံပင်နေရာချထားလည်းအလွန်အထူးသဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်, ဆိုဖာ၏အထူးသဖြင့်အနေအထား. အသုံးပြုခြင်းကာလအတွင်းလုံခြုံစိတ်ချမှုရှိစေရန်ဆိုဖာကိုထားသောအခါဟိုတယ်သည်နောက်ကျောကိုမှီခိုသင့်သည်. တိုက်ရိုက်အလင်းအောက်တွင်ဆိုဖာနေရာချထားခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ, မဟုတ်ရင်, ၎င်းသည်လူကိုမူးဝြေခင်းနှင့်အနားမယူရန်ဖြစ်စေသည်. တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, အဆိုပါဆိုဖာအဖြစ်ဝေးတတ်နိုင်သမျှတံခါးဝမှာထားမရသင့်ပါတယ်. Fengshui တံခါးအပြင်ဘက်တွင်လေစီးဆင်းမှုပိုမိုများပြားလာလိမ့်မည်, လူတွေရဲ့ကံကြမ္မာအပေါ်မကောင်းတဲ့သြဇာသက်ရောက်လိမ့်မယ်။
ဟိုတယ်ပရိဘောဂသန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့အခါ, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဟိုတယ်သန့်ရှင်းရေးကိုအသုံးပြုသင့်သည်. ကွဲပြားခြားနားသောဟိုတယ်ကြယ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကြောင့်ဟိုတယ်ရှိပရိဘောဂများသည်အဆင့်အမျိုးမျိုးရှိလိမ့်မည်. သို့သော်, သန့်ရှင်းရေးလုပ်သည့်အခါအချို့လိုအပ်ချက်များနေဆဲအတူတူပင်ဖြစ်ကြသည်. ခေတ်ပြိုင်ထောင့်ဆိုဖာကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်ဟိုတယ်သန့်ရှင်းရေးကိုသုံးသည့်အခါရှောင်သင့်သည့်နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းများကိုကြည့်ကြစို့. 1. ပရိဘောဂများကိုသုတ်ရန်ကြမ်းသောအထည်သို့မဟုတ်အဝတ်ဟောင်းကိုမသုံးပါနှင့်. ပရိဘောဂများကိုလက်သုတ်ပုဝါနှင့်သုတ်ခြင်းကအကောင်းဆုံး, ဝါဂွမ်းအထည်, ဝါဂွမ်းထည်သို့မဟုတ် flannel အထည်, နှင့်အခြားစုပ်အထည်. ကြမ်းထည်, ချည်မျှင်အထည်, သို့မဟုတ်ချုပ်နှင့်အတူဟောင်းအဝတ်, ခလုတ်များ, စသည်တို့. ပရိဘောဂ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ခြစ်ရာများကိုဖြစ်နိုင်သမျှများများရှောင်ရှားသင့်သည်. 2. ပရိဘောဂ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိဖုန်များကိုခြောက်သွေ့သောအ ၀ တ်ဖြင့်မသုတ်ပါနှင့်. ဖုန်သည်ဖိုင်ဘာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်, သဲ, နှင့် silica. လူအများစုတို့သည်ပရိဘောဂများ၏မျက်နှာပြင်ကိုခြောက်သွေ့သောအထည်ဖြင့်သုတ်လိမ်းရာတွင်အသုံးပြုကြသည်. ဤအမှုန်လေးများသည်ပရိဘောဂများ၏မျက်နှာပြင်ကိုအလွယ်တကူပျက်စီးစေနိုင်သည်. ဤအခြစ်အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သော်လည်း, နှင့်အဝတ်အချည်းစည်းမျက်စိမှမမြင်ရတဲ့, တစ်ည, ပရိဘောဂများ၏မျက်နှာပြင်မှိန်နှင့်ကြမ်းတမ်းပါလိမ့်မည်, နောက်တဖန်အလင်းသည်မလင်းနိုင်. 3. ဆပ်ပြာရေကိုမသုံးပါနှင့်, ဆပ်ပြာ, သို့မဟုတ်ပရိဘောဂများကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်ရေ. ရေထင်းသို့စိမ်လျှင်, ၎င်းသည်သစ်သားကိုပုံသဏ္orာန်ဖြစ်စေသို့မဟုတ်တစ်ပိုင်းတစ်စပုံပျက်သောဖြစ်စေသည်, ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းတိုစေ. သန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့အခါ, သငျသညျစနစ်တကျသုတ်ရန်သန့်ရှင်းသောရေကိုသုံးနိုင်သည်, သို့သော်သစ်သားထဲသို့အစိုဓာတ်ကိုမ ၀ င်စေရန်စိုစွတ်သောအဝတ်ကိုပရိဘောဂ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အချိန်ကြာမြင့်စွာမထားပါနှင့်. နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက် PLS ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ. ကျနော်တို့ဆိုဖာအိပ်ရာထုတ်လုပ်သူဒါပေမယ့်လည်းဟိုတယ်ပရိဘောဂဒီဇိုင်နာမသာ
တစ် ဦး ကထည်ဆိုဖာအချို့သောအပြောင်းအလဲနဲ့ပြီးနောက်အဓိကပစ္စည်းအဖြစ်အထည်နှင့်လုပ်သောဆိုဖာဖြစ်ပါတယ်. ပစ္စည်းအရသိရသည်, ကစင်ကြယ်သောအထည်ဆိုဖာနှင့်သားရေအထည်ပေါင်းစပ်ဆိုဖာသို့ခွဲခြားထားတယ်. လူကြိုက်များသောအထည်အလိပ်ဆိုဖာများသည်လူကြိုက်များသောဖက်ရှင်ဖြစ်သည်, စီးပွားရေး, နှင့်အသုံးပြုပါ. ၎င်းတို့သည်ဟိုတယ်ပရိဘောဂများတွင်အသုံးများသောပရိဘောဂများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်. ၎င်းသည်လူများ၏အိမ်သုံးပရိဘောဂများအတွက်ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုလည်းဖြစ်သည်. ထည်ဆိုဖာကိုသန့်ရှင်း။ တောက်ပနေစေရန်, ကျွန်တော်မကြာခဏသန့်ရှင်းရေးနှင့်ထိန်းသိမ်းရပေမည်. 1. တစ်ပတ်တကြိမ်ဖုန်မှုန့်, နှင့်ဆိုဖာ၏ကျန်ဖုန်, backrest နှင့် crevices. သင်တစ် ဦး လေဟာနယ်သန့်စင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုရင်, သုတ်ပုဝါနှင့်လည်းသုတ်နိုင်သည် 2. တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ဆိုဖာအားသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရန် antifouling agent ပါဝင်သောအထူးဆပ်ပြာကိုရွေးချယ်နိုင်သည်, ဒါပေမယ့်ဆပ်ပြာနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်နောက်မှပယ်ဆေးကြောရပါမည်, မဟုတ်ရင်, ဒါကြောင့်ဖုန်နှင့်အတူစွန်းခံရဖို့ကပိုများပါတယ်. 3. ဖျော်ရည်မတော်တဆထောင့်ဆိုဖာပေါ်တွင်မတော်တဆမှီဝဲလျှင်, သင်အနည်းငယ်မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါနှင့်ရေနှင့်အတူရောထွေးနိုင်ပါတယ်, ထို့နောက်အစွန်းအထင်းများကိုဖယ်ရှားရန်အထည်ဖြင့်သုတ်ပါ. 4. အိတ်နှင့်အတူထည်ဆိုဖာယေဘုယျအားဖြင့်သန့်ရှင်းနိုင်ပါတယ်. သူတို့ထဲတွင်, အဆိုပါ elastic အဖုံးအိမ်မှာအဝတ်လျှော်စက်အတွင်းအဝတ်လျှော်ဖို့ခံနိုင်ရည်မရှိ, နှင့်ပိုကြီးတဲ့ဝါဂွမ်းသို့မဟုတ်ပိတ်ချောအဖုံးအဝတ်ဆိုင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ပါတယ်. တစ်ဆိုဖာအိပ်ရာထုတ်လုပ်သူအဖြစ်, ကနေရှေးခယျြဖို့အများအပြားစတိုင်များရှိပါတယ်. ပြီးပြည့်စုံသောဆိုဖာပရိဘောဂအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ!
သုံးပုံတစ်ပုံအိပ်ယာပေါ်မှာနေခဲ့ရသည်, ထုံးစံနွေ ဦး နှင့်မှတ်ဉာဏ်မြှုပ်မွေ့ယာအရေးပါသည်. ၎င်းသည်လူတစ် ဦး ၏အိပ်စက်ခြင်းအရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်, နှင့်လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု function ကိုရှိသည်, ထိုဆန့်ကျင်ပေါ်, အကယ်၍ ၀ ယ်ပါက၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင်မွေ့ရာများနှင့်မသင့်တော်ပါကလူတစ် ဦး ကိုပိုပင်ပန်းစေနိုင်သည်, ခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားများသည်ထိရောက်သောအပန်းဖြေမှုမရနိုင်ပါ, ဒါပေမယ့်နေ့သစ်ရဲ့အလုပ်အတွက်စိတ်ဓာတ်မကျပါဘူး, ထို့အပြင်ကိုယ်ခန္ဓာ၏ဖိအားကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်, နှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာအဘို့, အဆိုပါကျောရိုးပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်, ထိုရှုထောင့်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဂရုပြုသင့်သည့်အခါထုံးစံအတိုင်းမွေ့ရာပေါ်တွင်. သငျသညျကျပန်းတက်နှင့်လှိမ့ကျပန်းမွေ့ရာပေါ်အိပ်ချင်စိတ်ရှိပါသလား? သင်၏သူငယ်ချင်းအနည်းငယ်နှင့်မျှဝေရန်အတွက်ကြီးမားသောမွေ့ရာတစ်ခုပိုင်ဆိုင်လိုပါသလား? ထိုအခါသင်သည်မွေ့ရာကိုသင်၏အရွယ်အစားအဖြစ်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်သင့်သည်. ဤအကျွမ်းတဝင်မွေ့ရာများကိုမွေ့ရာများကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ရန်, ကျနော်တို့အချို့ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများမျှဝေပါ. 1. ဟိုတယ်အဖြစ်ထုတ်လုပ်သူများ၏ခွန်အား, ဟိုတယ်ပရိဘောဂများထုတ်လုပ်မှုသည်စိတ်ချရလောက်အောင်ပုံမှန်ထုတ်လုပ်သူကိုရွေးချယ်ရမည်, နှင့်ဆိုဖာအိပ်ရာထုတ်လုပ်သူ၏အရည်အသွေးခွဲခြားရန်အာရုံစိုက်, ထိုကဲ့သို့သောအရည်အသွေးအသိအမှတ်ပြုစနစ်အဖြစ်, ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်စနစ်သည်ပြည့်စုံနေသည်, အရည်အချင်းရှိမရှိ. သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ရှိသည်, အဖြစ်ကြီးမားသောဟိုတယ်အမှုပေါင်းပြီးစီး. စက်ရုံ၏ခွန်အားသည်နောက်ဆက်တွဲ ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်အတွက်ခိုင်မာသောအထောက်အကူဖြစ်သည်. 2. ပစ္စည်းများမွေ့ရာများကိုပြုပြင်ခြင်းသင်နှင့်သင့်တော်သောမွေ့ရာကိုစိတ်တိုင်းကျပြုပြင်လိုပါက, သင်သိရန်ပထမ ဦး ဆုံးအရာသည်ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီမှသင့်အားပေးနိုင်သောကွဲပြားခြားနားသောအတွေ့အကြုံများဖြစ်သည်. အညိုရောင်, ရေမြှုပ်, စေး, မှတ်ဉာဏ်ဝါဂွမ်း, hydrophilic ဝါဂွမ်း, ဂျယ်လ်, နွေ ဦး ပေါက်, 3: D ပစ္စည်းများ, စသည်တို့. သငျသညျသူတို့အားပစ္စည်းများသိသောအခါ, သင်ကျိန်းသေသင်တစ်ခုခုရှိသည်လိမ့်မယ်. ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီ၏သက်သောင့်သက်သာရှိသည်, ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများ၏မွေ့ရာရွေးချယ်ဖို့တစ် ဦး ချင်းစီကွဲပြားခြားနားသောအရည်အသွေးကိုလိုက်စားသည်နှင့်အညီကြယ်ပွင့်ဟိုတယ်အထူးမွေ့ရာ 3. သိပ္ပံနည်းကျတွက်ချက်မှုများမှတဆင့်လူအများစု၏ဘဝ၏သုံးပုံတစ်ပုံသည်ကူးစက်ခံရခြင်းကြောင့်မွေ့ရာ၏အရေးပါမှုကိုပြသသည်, ခန္ဓာကိုယ်၏လျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်သောကြောင့်အိပ်ပျော်နေသူအားလုံး
မွေ့ယာပြုပြင်ခြင်းအတွက်စည်းမျဉ်းငါးခုရှိသည်. ဖုန်မှုန့်များမကျစေဘဲကောင်းသောညသို့ဝင်ရန်အချိန် နည်း၍ သက်သာစေမည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်, ပိုး, etc စည်းမျဉ်း 1: နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသင့်ရဲ့မွေ့ရာများကိုလေဝင်လေထွက်ရှိသည်, ငါတို့အိပ်ပျော်နေချိန်မှာငါတို့တစ် ဦး စီမှာရေပိုင့်တစ်ဝက်လောက်ဆုံးရှုံးတယ်, ၎င်းသည်ဖုန်မှုန့်များအတွက်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုဖန်တီးပေးပြီးအစွန်းအထင်းများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်. သင်မြက်ပင်မထိမီပြတင်းပေါက်ဖွင့်လှစ်, အရာလည်းဒါဆွဲဆောင်မှုကိုရှာဖွေသောသင်၏အိပ်ခန်းထဲမှာစိုထိုင်းဆကိုထိန်းညှိကူညီပေးပါမည်. စည်းကမ်း 2: အပတ်စဉ်အိပ်ယာခင်း - အနည်းဆုံး! အနည်းဆုံးတစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်နှင့်အနိူင်အဖုံးများကိုပြောင်းလဲပြီးအနည်းဆုံးအပူချိန် ၆၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်ဆေးကြောခြင်းဖြင့်ဖုန်မှုန့်များကိုသင်၏မွေ့ရာတွင်နေထိုင်ခြင်းကိုတားဆီးပါ။. ချွေးများသို့မဟုတ်အခြားခန္ဓာကိုယ်အရည်များကိုသင်၏မွေ့ရာများနှင့်အဆက်အသွယ်မလုပ်စေရန်စက်ခံနိုင်သောလျှော်ထားသောမွေ့ယာအကာအကွယ်ကိုသုံးပါ. ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးတံဆိပ်ပေါ်တွင်အကြံပြုထားသည့်အပူချိန်အမြင့်ဆုံးတွင် ၂ လတစ်ကြိမ်ဆေးကြောပါ. စည်းကမ်း 3: သင်၏မွေ့ရာကိုပုံမှန်ဖုန်စုပ်ပါ၊, ငါတို့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအရေပြားဆဲလ်သေကောင်တစ်ဝက်နီးပါးဆုံးရှုံးတယ်, နှင့်ဤအချို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့матрац၌ထအဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်. နောက်တဖန်, ဒီဖုန်မှုန့်သွင်းများအတွက်သံလိုက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်. ဖုန်မှုန့်များနှင့်သေစေနိုင်သောအရေပြားဆဲလ်များကိုသင်၏မွေ့ရာကိုစုပ်ထုတ်မှုနည်းသောအခြေအနေတွင်တစ်လတစ်ကြိမ်ဖုန်စုပ်ခြင်းဖြင့်အအေးခံပါ, သင်၏ဖုန်စုပ်စက်၏ကူရှင်ချုပ်ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုသည်. သင်၏မွေ့ရာ၏အနားစွန်းတစ်လျှောက်ရှိပိုက်လိုင်းများသည်ဖုန်မှုန့်များနှင့်အရေပြားဆဲလ်သေများစုဆောင်းခြင်းကိုအားပေးနိုင်သည်, လုပ်နိုင်တဲ့ခလုတ်ကိုအဖြစ်, ဒါကြောင့်ဒီဒေသများအထူးအာရုံစိုက်ပေးပါ. စည်းကမ်း 4: သင်သည်သင်၏မွေ့ယာကိုဖွင့်သင့်မသင့်ကိုစစ်ဆေးပါ°°သင်သည်သင်၏မွေ့ရာ 80 °ကိုဖွင့်သင့်သည်ကိုစစ်ဆေးပြီး၎င်းတို့ကိုသင်ဝယ်ယူပြီးနောက်သုံးလအပတ်စဉ်လှန်လှောကြည့်ပါ။, ထို့နောက်သုံးလေးလတိုင်းတစ်ကြိမ်. သင်၏မွေ့ရာကိုလှန်ချသောအခါသို့မဟုတ်လှည့်ရန်သင်မှတ်မိရန်ကူညီသည်, သင်၏ပြက္ခဒိန်တွင်သတိပေးချက်တစ်ခုရေးပါသို့မဟုတ်သင့်ဖုန်းပေါ်တွင်သတိပေးချက်တစ်ခုထားပါ. စည်းကမ်း 5: ယိုဖိတ်မှုနှင့်အစွန်းအထင်းများပေါ်၌အစာရှောင်ခြင်းဖြင့်အစွန်းအထင်းအများစုနှင့်အတူ, ကြာကြာသင်မွေ့ရာအစွန်းအထင်းထားခဲ့ပါ, သူတို့ကရွှေ့ဖို့ခက်ခဲလေလေ. သင့်ရှေ့မှောက်မွေ့ရာကိုမတ်တပ်ရပ်ပါ။
ပုံမှန်အသုံးပြုသူများအတွက်မွေ့ရာသည်အမြဲတမ်းပြanနာဖြစ်ခဲ့သည်, ဖြန့်ဖြူးသူ, သို့မဟုတ်ရောင်းချသူ. နှစ်ရှည်ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံပေါ်အခြေခံသည်, သင်နှင့်အတူမျှဝေရန်အကြံပြုချက်များရှိပါသည်. ဤအရာသည်သင်၏မွေ့ရာကိုကြာရှည်စွာထားသင့်သည်. OEM ဖောက်သည်များအတွက်အကြံပြုချက်များ 1. သိုလှောင်ခြင်းစိုထိုင်းဆသိုလှောင်မှုပတ်ဝန်းကျင်သည်သိုလှောင်ရုံ၏အကြံပြုထားသောစိုထိုင်းဆမှိုများအကြားဖြစ်ခြင်းမှရှောင်ရှားရန်သိုလှောင်မှုပတ်ဝန်းကျင်သည်သင့်တင့်သောခြောက်သွေ့သောအခြေအနေဖြစ်သင့်သည် 50%-55%. စိုထိုင်းဆအထက်ဖြစ်ပါတယ်လျှင် 65%, ပိုးမွှားလျှင်မြန်စွာမျိုးပွားပါလိမ့်မယ်; 2. သိုလှောင်သည့်အပူချိန်အပူရှိန်သည်ပိုးမွှားများပွားများရန်အတွက်ကောင်းမွန်သည်. အပူချိန်မြင့်မားခြင်းသည်ပစ္စည်းအိုမင်းခြင်းကိုဖြစ်စေသည်. ဂိုဒေါင်အေးမြပါ, မွေ့ရာများကိုသိုမှီးထားလျှင်ပိုကောင်းသည်. အကြံပြုထားသည့်အပူချိန်သည်အောက်တွင်ရှိသည် 26 ဒီဂရီ 3. ထိတွေ့ပတ်ဝန်းကျင်၏အလင်းထည်အရောင်ပြောင်းလဲမှုသို့မဟုတ်မွေ့ရာပေါ်ပစ္စည်းအိုမင်းခြင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်, ကုန်ပစ္စည်းများကိုပြသရန်ထုတ်ကုန်များ၊ အရောင်းပြခန်းသက်တမ်းတိုးရန်အတွက်ရှည်လျားသောအကြံပြုချက်များအတွက်တိုက်ရိုက် Lamplight သို့မဟုတ်နေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက်ထုတ်ကုန်များမထုတ်ဖော်သင့်ပါ။: သင်၏ပြသထားသည့်မွေ့ယာနှစ်ခုစလုံးကိုသက်တမ်းတိုးရန်အကြံပြုသည် 4. အနေအထားသိုမှီးထားသည့်မွေ့ရာသင်မွေ့ရာများကိုဂိုဒေါင်တွင်သိုလှောင်သောအခါ, ကျေးဇူးပြုပြီးအစိုင်အခဲမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပြားချပ်ချပ်ထားပါ, မဟုတ်ရင်, မမှန်ကန်သောသိုလှောင်မှုအာမခံပုံစံပြားချပ်ချပ်အချိန်ကြောင့်မွေ့ရာများဆောက်လုပ်ခြင်းပျက်စီးသွားလိမ့်မည်: မွေ့ရာများ၏အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်ကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ပြန်တက်ရန်ပြproblemနာကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်, သငျသညျအသီးအသီးအားဖြင့်တစ် ဦး ချင်းစီအားဖြင့် compressed ထုပ်ပိုးဖြန့်ချိရန်အကြံပြုထားသည်, သူတို့ကိုလက်ခံရရှိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်အာမခံပြားပြားချပ်ချပ်အတွင်းချုံ့ခြင်းကိုသေချာစွာစစ်ဆေးပါ: မွေ့ရာအမျိုးအစားအာမခံ - ပြားချပ်ချပ်အချိန်ရေမြှုပ်မွေ့ယာသုံး(3) လပေါင်းများစွာမြှုပ် encasement မြှုပ် encasement PU မြှုပ်နှင့်အတူ + နွေ ဦး ကွိုင်ခြောက်(6) သုံးလ (3) လပေါင်းများစွာမှတ်ဉာဏ်အမြှုပ် / ဂျယ်လ်မှတ်ဉာဏ်အမြှုပ် / Latex + နွေ ဦး ကွိုင်သုံး (3) သုံးလ(3) လများ 5. အာမခံချက် - လှိမ့်ချုံ့ထားသောအချိန် - မွေ့ရာ၏အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်ကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ပြန်တက်ရန်ပြproblemနာကိုရှောင်ရှားရန်, သငျသညျအသီးအသီးအားဖြင့်တစ် ဦး ချင်းစီအားဖြင့် compressed ထုပ်ပိုးဖြန့်ချိရန်အကြံပြုထားသည်, သူတို့ကိုလက်ခံရရှိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်အာမခံ Rolling-compression အချိန်အတွင်းချုံ့ခြင်းကိုသေချာစွာစစ်ဆေးပါ: မွေ့ရာအမျိုးအစားအာမခံချက်လှိမ့်ချိမ့်သည့်အချိန်ရေမြှုပ်မွေ့ယာသုံး(3)…
မွေ့ယာများအကြားတွင်, နူးညံ့သောမွေ့ယာများမှာပိုလျှံသည် 3500 စမ်းရေ. သာမာန်အားဖြင့်ပိုမိုအားကောင်းသောအရိုးအထူးကုမွေ့ရာများတွင်စမ်းရေများကိုတွေ့ရလေ့ရှိသည်. အိတ်ဆောင်နွေ ဦး မွေ့ရာတီထွင်မှုသည်အိတ်ဆောင်နွေ ဦး မွေ့ရာများဖန်တီးရန်လှုံ့ဆော်ပေးသောကြောင့်အတော်လေးလူသိများသည်. ဒီမွေ့ရာတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်, တစ် ဦး ချင်းစမ်းရေအားဖြင့်ထူးခြားသောနှစ်သိမ့်မှုပေးပါ. ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘာဝပုံစံကိုလိုက်နာကတည်းက, ဒါဟာအကောင်းဆုံးစံပြအရိုးအထူးကုဆရာဝန်ဖြစ်ခြင်းတက်အဆုံးသတ်ထားသည်. ကောင်းမွန်သောအိပ်စက်ခြင်းအတွက်, သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အခြေအနေနှင့်ကိုက်ညီသောမွေ့ရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်. အိတ်ဆောင်နွေ ဦး မွေ့ရာသည်ယနေ့ခေတ်တွင်လက်ခံနိုင်သောအသိအမှတ်ပြုမှုကိုတိုးပွားစေသည်. သမားရိုးကျမွေ့ယာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်သောအခါ၎င်းတို့သည်အကောင်းအဆိုးများစွာကိုပေးသည်, မလွှဲမရှောင် cons, တစ်ခုခုကိုဖြစ်စေ. အိတ်ဆောင်နွေ ဦး အဖုံး၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများကိုကြည့်ပါ. Pros 1. အမှီအခိုကင်းစွာရွေ့လျားနေသည့်စမ်းရေများအိတ်ဆောင်နွေ ဦး အဖုံးများသည်ရာပေါင်းများစွာသောထောင်ပေါင်းများစွာသောဇိမ်ခံပစ္စည်းများ၏အလွှာအောက်ရှိနူးညံ့သိမ်မွေ့သောအိတ်ကပ်ထဲ၌စောင်ရေများပါ ၀ င်သည်။. ဤမွေ့ရာသည်ဖိအားမှန်ကန်သောဖိအားဖြင့်လွတ်လပ်စွာအလုပ်လုပ်သည်ဟူသောအချက်ကြောင့်အလွန်လူကြိုက်များသည်. မည်သို့ပင်ဖြစ်စေလူနှစ် ဦး သည်အလားတူကုတင်တစ်မျိုးတည်းရှိမရှိ, ဒီအိပ်ယာလွတ်လပ်စွာသူတို့အသီးအသီးအားဖြည့်ပါလိမ့်မယ်, သူတို့ကိုသင့်လျော်သောအကူအညီပေးခြင်း. ဦး ခေါင်းမှခြေချောင်းသို့စတင်ခြင်း, အိတ်ဆောင်နွေ ဦး အိပ်ပျော်နေတဲ့ခေါင်မိုးနှင့်အတူသင်တစ် ဦး နက်ရှိုင်းသောအကူအညီဒီဂရီကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်. နောက်ထပ် ဦး စားပေးအနေအထားတစ်ခုမှာမွေ့ရာ၏သက်ရောက်မှုကိုဖယ်ရှားပေးသကဲ့သို့၎င်းသည်အတူတကွလှိမ့်မှုကိုလျှော့ချခြင်းဖြစ်သည်. ကိုယ်အလေးချိန်ပိုမိုဆန့်ကျင်မှုရှိသူများသည်သင့်ကိုယ်ခန္ဓာ၏ပုံသဏ္indicatedာန်အတိုင်းညွှန်ပြသည့်အတိုင်းပြောင်းလဲနိုင်သည်, ဤအချက်များကြောင့်သင့်ကိုများစွာအကူအညီပေးသည်. မွေ့ယာများနှင့်ဆိုဖာများထားရှိရန်လိုအပ်သည်. ရေတပ်အပြာထောင့်ဆိုဖာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးဆိုဖာတစ်ခုဖြစ်သည်. 2. Phenomenal strains of ရွေးချယ်မှုစမ်းရေတွင်းများအတွက်အမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားများရှိပါသည်. သူတို့ထဲကတချို့ကနူးညံ့သိမ်မွေ့သောပါဝင်သည်, အလယ်အလတ်, နှင့်ခိုင်မြဲသော. သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကမည်သို့တုံ့ပြန်မည်ဆိုသည့်အပေါ် မူတည်၍ သင်လိုအပ်သည့်အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်နိုင်သည်. ဘယ်အချိန်မှာကျောရိုးနာကျင်မှုနှင့်အတူစိတ်ဖိစီးမှုမပို
လူအများစုကဆိုဖာကို ၀ ယ်ဖို့မဝံ့မရဲဖြစ်နေတယ်လို့ငါသိတယ်. ထို့ကြောင့်, နှစ်ပေါင်းများစွာပရိဘောဂများထုတ်လုပ်ခြင်းမှအကျိုးရှိသည်, ကျွန်ုပ်တို့ဖောက်သည်များအားအောက်ပါဆိုဖာ ၀ ယ်ခြင်းအကြံပေးချက်များနှင့်မျှဝေနိုင်သည်. 1. Check the Fit သင့်အတွက်မသင့်တော်သည့်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပေါ်တွင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာထိုင်ရန်စဉ်းစားခြင်းမှာအဓိပ္ပာယ်မရှိပါ. သင့်မိသားစုမှလူတိုင်းအတွက်ထိုင်ခုံများသည်သင့်တင့်လျောက်ပတ်သင့်သည်. အမှု၌သင်သည်ထိုင်ခုံအိပ်ရာဝယ်ယူရန်, အားလုံးအမျိုးမျိုးသောရာထူးအတွက်နှငျ့ညီညှတျသေချာပါစေ. မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအတွေးသည်ထိုင်ခုံ၏ကြွယ်ဝမှုဖြစ်သည်. လေးနက်သောသို့မဟုတ်တိမ်ပိုင်းထိုင်ခုံများကိုရွေးချယ်ပါ, သင့်အနေအထားပေါ် မူတည်၍ ထိုင်ခုံ၏နောက်ကျောကုလားထိုင်သည်အောက်ခြေထိုင်ခုံ pad ၏ရှေ့သို့သာခြေထောက်ကြမ်းပြင်ပေါ်ခြေထောက်နှင့်ဒူး၏နောက်ကျောများနှင့်လုံလောက်စွာသင်၏ကျောကိုခိုင်ခံ့စေသင့်သည်. နောက်ထပ်ဘာလဲ, အချစ်ထိုင်ခုံသည်သင်အနားယူလိုသောနေရာဖြစ်ပါက, Lounge ကုလားထိုင်ပေါ်သို့ပြန့်နှံ့သွားပြီး၎င်းသည် napping နှင့်ပျော်ရွှင်နိုင်လောက်အောင်ရှည်လျားခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးပါ. 2. အကဲဖြတ်ရန် Frame Upholstery texture နှင့်ဟောင်းနွမ်းလာသည့်အခါ pads များကိုအစားထိုးနိုင်သည်, သို့သော်, မည်သည့်ဆိုဖာမျှအားကောင်းသောအားဖြင့် မှလွဲ၍ သင့်တင့်လျောက်ပတ်သောအိမ်သုံးပစ္စည်းများအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်သည်, အရည်အသွေးအတွင်းပိုင်းထည်. သင်လျောက်ပတ်သောအိပ်ရာတစ်ခုဝယ်ယူဖွယ်ရှိသည်, အစွန်းအကြောင်းကိုရှာတွေ့ခြင်းဖြင့်စတင်ပါ. စျေးသိပ်မကြီးတဲ့ခုံတန်းရှည်တွေထဲမှာ particleboard ကိုသုံးပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့အောက်လိုင်းတွေရှိနိုင်တယ်, ပလပ်စတစ်, သို့မဟုတ်သတ္တု, သို့တိုင်ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးရှိသောချစ်ခြင်းမေတ္တာထိုင်ခုံသည်ခိုင်မာသောသစ်မာအကြမ်းဖျင်းရှိလိမ့်မည်, an "မီးဖိုခန်းခြောက်" သပိတ်ပင်၏သစ်မာအကြမ်းဖျင်း, ပင်လယ်ကမ်းခြေ, သို့မဟုတ်အပျက်အစီးများ. ထင်းရှူးအကြမ်းဖျင်းကျိုးနွံဖြစ်ကြသည်, သို့သော်, သူတို့သည်ငါးနှစ်အတွင်းသို့မဟုတ်အနီးအနားရှိတစ်နေရာရာတွင်လှည့်ဖျားခြင်း၊. ချစ်ခြင်းမေတ္တာထိုင်ခုံ၏ခြေထောက်များသည်အဖုံး၏အရေးကြီးသောအပိုင်းအစများဖြစ်သင့်သည်. ခြေထောက်များသာကပ်နေပါကဆိုဖာနှင့်မဟာဗျူဟာအကွာအဝေးကိုထိန်းသိမ်းပါ. ခိုင်ခံ့သောအစွန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရိုးရှင်းသောစမ်းသပ်မှုတစ်ခုမှာကြမ်းပြင်မှရှေ့ထောင့် (သို့) ခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုအမြင့်သို့မြှောက်ရန်ဖြစ်သည်6လက်မသို့မဟုတ်ကဲ့သို့သောအရာ။
အတွက်ဟိုတယ်စီမံကိန်း 50 အယ်လ်ဂျီးရီးယားကနေ rooms ည့်ခန်း. တစ်ထိုင်တည်းဆိုဖာအိပ်ယာနှင့်အိပ်ယာခင်းထားသော Ottoman သည်သင်၏ suite အခန်းအတွက်ပိုမိုအဆင်ပြေနိုင်သည်. မွေ့ရာအရွယ်အစားသည်ကလေးသို့မဟုတ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအတွက်သင့်တော်သည်. ဆိုဖာသို့မဟုတ် Ottoman ကိုအိပ်စက်ခြင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်ခြေလှမ်းတစ်လှမ်းသာလိုအပ်သည်. နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်ဒီမှာနှိပ်ပါ: ဆိုဖာအိပ်ရာထုတ်လုပ်သူ
123...6 စာမျက်နှာ 1 ၏ 6